Waxyaabaha La Isweydiiyo - Tianjin TheOne Iron Products Products Co., Ltd.
Marka hore, xulo alaab-qeybiyaha alaabta ceeriin ee ugu fiican oo leh qiime jaban
Marka labaad, kordhi awoodda wax soo saarka, hoos u dhig qiimaha wax soo saarka,
Saddexaad, hannaanka wax soo saarka oo iskujira, hoos u dhig qiimaha shaqaalaha.
Kuwa soo socda, Ha dhumin goobta wax lagu xajisto, yaree qiimaha dhoofinta.
Haa, waxaan bixin karnaa dukumiintiyo badan oo ay ka mid yihiin Shahaadooyinka Qalabka, Warbixinta Baadhitaanka Badeecada, iyo dukumiintiyada sifeynta caadiga.
Shaybaarada, waqtiga hogaaminta waa 2-7 maalmood. Soo-saaris ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib marka la helo lacag-dhigashada. Waqtiyada hogaaminta ayaa dhaqan gala marka (1) aan helno deebaajigaaga, iyo (2) waxaan heysanno ogolaanshahaaga ugu dambeeya alaabadaada. Haddii waqtiyadeena hogaaminta aysan ku shaqeynin waqtigaaga kama dambeysta ah, fadlan ka gudbo shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonnaa inaanu ku haqabtiro baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Waxaad ku bixin kartaa lacagta koontadayada bangiga, Western Union, T / T, L / C indhaha iyo wixii la mid ah.
30% hormaris ah, 70% dheelitirka kahor bixinta
Waa maxay xakameynta tayada badeecada?
1.Ku soosaarida kahor, waxaan hubinaa dhamaan agabyada iyo waxyaabaha kiimikada iyo jirka
2.Shirkadda wax soo saarka, QC-dayada waxay ku sameyneysaa hubinta waqtiga iyo baarta goobta.
3.Booska la dhammeeyay, waxaan hubin doonaa muuqaalka, xarkaha * dhumuc weyn, bilaash ah iyo rar culeys iyo wixii la mid ah
4.Kahor intaan la keenin, waxaan sawiro ka qaadi doonnaa alaabada, markaa dhammaan howlaha kormeerka ayaa lagu hayn doonaa faylal waxayna sameyn doonaan warbixin kormeer.
Xidhmadeena caadiga ah waa boorsada caaga ah gudaha iyo kartoonka dibedda loo dhoofiyo oo leh pallet.Thus waxay ka hortageysaa badeecada inay qoyaan kartoonada iyo kartoonnada inay waxyeelloobaan .Haddii aad sidoo kale ubaahan tahay shuruudo kale, pls nala soo xiriir, waxaan isku dayi doonnaa inaan gaarno adiga.